IATA: Kushuvira kwemamiriro ekunze kwendege kunoratidza chinangwa chendege 'Net-Zero
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » avhiyesheni » IATA: Kushuvira kwemamiriro ekunze kwendege kunoratidza chinangwa chendege 'Net-Zero
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • Sustainability News • Technology • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau
Airlines pa77th IATA AGM muBoston, muna Gumiguru, yakabvuma kuwana net-zero kabhoni emissions panosvika 2050, zvinoenderana nechinangwa chechibvumirano cheParis chekuchengeta kudziya kwepasi kusvika pa1.5 degrees.
Chisungo chakabuda muCOP26 idanho rakatorwa nenyika makumi maviri nenhatu kusaina chibvumirano cheInternational Aviation Climate Ambition Declaration.
Chiziviso chinoziva kukosha kwekufamba nendege kuti "kure zvakatsiga" uye inodzokorora basa reICAO rekuita zvibodzwa zvenguva pfupi, zvepakati uye zvenguva refu zvemamiriro ekunze kune indasitiri.
Kuve nechokwadi chekubudirira kwakanyanya kweCarbon Offsetting uye Reduction Scheme yeInternational Aviation, uye kuvandudzwa uye kutumirwa kwemafuta ekufambisa endege akasimba ndizvo zvinangwa zvakakosha zveDeclaration.
The International Mhepo Yekufambisa Sangano (IATA) vakagamuchira zvisungo zvekusimbaradza maitiro emamiriro ekunze akaitwa paCOP26, uye vakadaidzira kuti kuyedza kwepasi rose kubvisa carbonize ndege dzitsigirwe nemitemo inoshanda, inoshanda yehurumende.
Kutungamira kwezvisungo zvemamiriro ekunze kwendege kunogara kunze kwechirongwa cheCOP uye ibasa reInternational Civil Aviation Organisation (ICAO). Zvakangodaro, ndege dzepa77 Iată AGM muBoston, Gumiguru, yakabvuma kuwana net-zero kabhoni emissions panosvika 2050, zvinoenderana nechibvumirano cheParis chakarebesa chinangwa chekuchengetedza kudziya kwepasi kusvika pa1.5 degrees.
"Ndege dziri munzira yekubuda net-zero kabhoni, zvinoenderana nechibvumirano cheParis. Isu tose tinoda rusununguko rwekubhururuka zvine mwero. Kusvika pakuburitswa kwenet-zero richava basa hombe rinoda kushanda nesimba kwemaindasitiri nerutsigiro kubva kuhurumende. Mhiko dzakaitwa kuCOP26 dzinoratidza kuti hurumende zhinji dzinonzwisisa kiyi yekufambira mberi nekukurumidza kukurudzira shanduko yetekinoroji uye kupa mari yezvigadziriso. Izvi ndezvechokwadi kunyanya nezvemafuta ekufambisa endege, ayo achaita basa guru mukugadzirisa kukanganiswa kwezvakatipoteredza nendege — vanoda kurudziro yakafanira kubva kuhurumende kuti vawedzere kugadzirwa kwezvinhu,” vakadaro. Willie Walsh, Director General weIATA.
Chisungo chakabuda muCOP26 idanho rakatorwa nenyika makumi maviri nenhatu kusaina chibvumirano cheInternational Aviation Climate Ambition Declaration. Declaration inoona kukosha kwekufamba kwendege kuti "kure zvine mwero" uye inodzokorora ICAOBasa rekuita zvibodzwa zvenguva pfupi, zvepakati uye zvenguva refu zvemamiriro ekunze kune indasitiri. Kuve nechokwadi chekubudirira kwakanyanya kweCarbon Offsetting uye Reduction Scheme yeInternational Aviation (CORSIA), uye kuvandudzwa uye kutumirwa kwemafuta ekufambisa endege (SAF) ndizvo zvinangwa zvakakosha zveDeclaration.
“Tinotenda nyika idzo dzakasaina chibvumirano cheInternational Aviation Climate Ambition Declaration uye tinokurudzira nyika dzakawanda kuti dzizvipire kuita chirongwa ichi. Chirongwa chakasimba uye chechokwadi chekubhururuka net zero panosvika 2050 chakabvumiranwa nenhengo dzedu dzendege chinogona kubatsira zvikuru kunhengo dzeICAO padzinofambira mberi nehurongwa hwepasi rose uye chinangwa chenguva refu chekudzikisa kabhoni yendege, "akadaro Walsh.